IKapom ikuyo yonke indawo kubomi bethu bemihla ngemihla, ngaba uyiqaphele? Namhlanje siza kufunda malunga NOKUSETYENZISWA kwale kapom imangalisayo noMongameli uHu kwi-Inoxon New Materials.
1. Khusela ulusu lwakho
I-Kapok inefuthe elibonakalayo lokhuselo kulusu lomzimba womntu, inolwalamano oluthile kulusu lomzimba womntu, umntu ngokubanzi uyifaka kwizithambiso, sebenzisa kamva, unokukhusela ulusu, unokunciphisa ukhuthazo oluchasene nolusu lomntu kunye nolusu lwe-mucous membrane kunye nokwenzakala, inokuthintela ukwenzeka kwazo zonke iintlobo zempawu zokwaliwa.
2. Imitha ye-UV
I-carbomer iyasebenza, ifakwe kulusu lomntu, inokukhulisa ukuxhathisa kolusu lomntu kwi-ray ye-ULTRAVIOLET, inokunciphisa ingozi yelitha ye-ultraviolet kulusu lomntu, xa usebenzisa ehlotyeni, yongeza i-carbomer ukuthintela ukugcwala kwizinto, iya kuba Isiphumo esifanelekileyo se-sunscreen, sinokuthintela ulusu ukuba lube mnyama kunokuthintela ulusu ekutshisweni lilitha le-ultraviolet.
3. Ukunciphisa i-viscosity
ICarbomer yinto evulekileyo, enesicocic acid enokongezwa kwimveliso yegel okanye izithambiso. Inokunciphisa i-viscosity yezi zinto kunye nokugcina iipropathi zizinzile. Kwimveliso yangoku yemveliso, i-carbomer sisithako esibalulekileyo kwizithambiso kunye neegel.
4. Anti-ukudumba kunye nokubola
ICapoeum ikwangumxube wendalo, onokuthi unciphise ukudumba kunye nokubulala iintsholongwane. Okwangoku, amathontsi wamehlo e-capoeum athengiswa kwimarike yezonyango. Iyeza elenziwe ngayo njengeyona nto iphambili ekrwada.
5. Qinisekisa umgangatho wezithambiso
ICarbomer yikhemikhali engathathi hlangothi. Idlala indima ebaluleke kakhulu kwimveliso yezithambiso. Ingabamba izinto ezahlukeneyo ngokudibeneyo kwaye zigcine zikwimeko ezinzileyo